Wholesale Weak base anion exchange resin Mugadziri uye Mutengesi | Dongli
Vasina simba Base Anion (WBA) nebwes vari polymer inogadzirwa nepolymerizing styrene kana acrylic acid uye divinylbenzene uye chlorination,kuda. Dongli kambani inogona kupa gel uye macroporous mhando WBA resini ine akasiyana crosslink. Yedu WBA inowanikwa mumatanho mazhinji anosanganisira Cl mafomu, saizi saizi uye giredhi rekudya.
Asina kusimba anion anchinjana resin: iyi mhando resin ine isina kusimba ezvikwata, senge yekutanga amino boka (inozivikanwawo seyokutanga amino boka) - NH2, sekondari amino boka (sekondari amino boka) - NHR, kana tertiary amino boka (tertiary amino boka - - NR2. Vanogona kupatsanura Oh - mumvura uye vasina kusimba zvakakosha. Muzviitiko zvakawanda, iyo resin inoshambadza iyo yese mamwe mamorekuru easidhi mune mhinduro. Inogona chete kushanda pasi pezvematongerwo enyika kana acidic mamiriro (senge pH 1-9). Inogona kugadziriswazve neNa2CO3 uye NH4OH.
Yakasimba Base Anion Resins
Resins Chimiro chePolymer Matrix Chitarisiko Fomu Kuonekwa RinoshandaBoka Ionic Fomu Yese Shanduro Kugona meq / ml Mhepo Yemukati Particle Saizi mm KuzvimbaFB→ Cl Max. Kutumira Kurema g / L
MA301 Macroporous Ploy-styrene ine DVB Opaque Yakachena Spherical Mabheji Yepamusoro Amine Mahara Base 1.4 55-60% 0.3-1.2 20% 650-700
MA301G Macroporous Poly-Styrene ine DVB Yakachena Spherical Beads Yepamusoro Amine Cl- 1.3 50-55% 0.8-1.8 20% 650-690
GA313 Gel mhando Poly-acrylic ine DVB Transparent Idenderedzwa Mabheji Yepamusoro Amine Mahara Base 1.4 55-65% 0.3-1.2 25% 650-700
MA313 Macroporous Poly-acrylic ine DVB Yakachena Spherical Beads Yepamusoro Amine Mahara Base 2.0 48-58% 0.3-1.2 20% 650-700
Izvo zvigadzirwa zveindasitiri zveion exchange resin kazhinji zvine hushoma hwepasi polymer uye isingaite monomer monomer, pamwe neisina kujairika tsvina simbi, lead uye mhangura. Kana iro resini rikasangana nemvura, acid, alkali kana mamwe mhinduro, zvinhu zviri pamusoro zvinozoendeswa mukati memhinduro, zvichikanganisa kunaka kwemvura yakasviba. Naizvozvo, iyo resin nyowani inofanirwa kufananidzirwa isati yashandiswa. Kazhinji, mvura inoshandiswa kuita kuti resini iwedzere zvizere, uyezve, Iyo inorganic tsvina (kunyanya masimbi esimbi) inogona kubviswa ne4-5% sanganisa hydrochloric acid, uye iyo yakasviba tsvina inogona kubviswa ne 2-4% sanganisa sodium hydroxide mhinduro. Kana ikashandiswa mukugadzirira mishonga, inofanirwa kunyoroveswa mu ethanol.
Periodic Activation Kurapa
Mukushandisa resin, zvinodikanwa kudzivirira kusangana nekushatiswa kwemafuta, organic organic molecular microism, yakasimba oxidant uye zvimwe simbi (simbi, mhangura, nezvimwewo) kuitira kudzivirira kudzora ioni yekuchinjana kugona kana kunyange kurasikirwa nebasa. Naizvozvo, iyo resin inofanirwa kuvhurwa zvisina kujairika zvinoenderana nemamiriro ezvinhu. Iyo yekumisikidza nzira inogona kutemerwa zvinoenderana nekusvibisa mamiriro uye mamiriro. Kazhinji, iyo cation resin iri nyore kusvibiswa naFe mukunyorova nehydrochloric acid kunyudza, Wobva wadzora zvishoma nezvishoma, iyo anion resin iri nyore kusvibiswa ne organic chinhu. Inogona kunyoroveswa kana kushambidzwa ne10% NaCl + 2-5% NaOH yakavhenganiswa mhinduro. Kana zvichidikanwa, inogona kunyoroveswa mune 1% hydrogen peroxide mhinduro kwemaminetsi akati wandei. Zvimwewo, zvinogona zvakare kushandisa asidhi-base imwe nzira yekurapa, kurapwa kwechaji, kurapwa kwedoro uye dzakasiyana nzira dzekudzivirira.
Mutsva Resin Pretreatment
Kugadziriswazve kwerineni nyowani: mune zvigadzirwa zveindasitiri zveion exchange resin, pane mashoma maoligomers uye monomers asingatore chikamu mukuita, uye zvakare iine zvisakanaka zvisina kujairika simbi, lead uye mhangura. Kana iro resini rikasangana nemvura, asidhi, alkali kana imwe mhinduro, izvo zvinhu zviri pamusoro zvichazotamisirwa mumhinduro, zvinozokanganisa mhando yemvura inoyerera. Naizvozvo, iyo resin nyowani inofanirwa kutarisirwa kare isati yashandiswa. Kazhinji, iro resini rinokura nemvura, uyezve kusanzwisisika kwetsvina (kunyanya masimbi esimbi) kunogona kubviswa ne4-5% sanganisa hydrochloric acid, uye iyo yakasviba tsvina inogona kubviswa ne 2-4% sanganisa sodium hydroxide mhinduro kuti isukwe kusvika kwazvakarerekera.
Zvadaro: Macroporous chelation resin